ASAN-JIOLAHY TAO AMBANJA : Raim-pianakaviana iray maty voatifitra, lasa ny vola rehetra
Mirongatra ny asan-jiolahy ao an-tampon-tanànan’Ambanja sy ny manodidina, mihorohoro ny mponina ao an-toerana noho ny fandatsahan’aina ataon’ireo olon-dratsy. 10 janvier 2019
Araka ny loharanom-baovao voaray avy any amin’ny Fokontanin’ Ankazotelo Kaominina Ankatafa dia jiolahy miisa efatra nitondra basy maherivaika no tonga nanafika tokan-trano iray ny talata alina lasa teo. Olona miisa telo tao amin’ny fianakaviana ihany no tao an-trano ka ny raim-pianakaviana no maty voatifitra teo amin’ny fony tamin’io fotoana io. Lasan’ny jiolahy ihany koa ny vola rehetra tao anaty vata , izay tsy mbola voafaritra ny fitambarany.
Tafatsoaka ny vadin’ny maty izay niezaka nanavotra ny ainy ary rehefa vita koa ny asa ratsin’ireto mpandroba dia nirifatra tsy hita popoka izy ireo hatramin’izao. Raha ny fitantaran’ny fianakaviana niharan-doza dia mpitam-bolana fikambanana antsoina hoe “Miray hina” ity rangahy namoy ny ainy. Miisa telopolo ny mpikambana ao anatiny izay tantanany ka mandoa vola 40.000 Ariary isam-bolana ny mpikambana. Rehefa tapitra ny taona dia zarain’ny mpikambana ny vola saingy indrisy izao voatafika izao ary namoy ny ainy mihitsy.
Mampiahiahy hatreto ny olona nahavanon-doza ary mbola tsy fantatra mazava ny antony. Andrasana ny famotorana ilay vadiny raha toa ka mahatadidy ny endrik’ireo olon-dratsy. Eo am-panaovana ny famotorana lalina ny zava-nisy,ny eo anivon’ny zandary ao an-toerana amin’izao fotoana izao.